Shaqaalaha Wakaalada Dakhliga M.M Goday Oo Dhir Beeris Sameeyay - Cakaara News
Shaqaalaha Wakaalada Dakhliga M.M Goday Oo Dhir Beeris Sameeyay
Goday(cakaaranews)Talaado 4ta October 2016. Badhtamaha maamulka magaalada goday gaar ahaan wareega ama goobta looyaqaano (adhabaabayga ama masooriyaaga) ayaa maanta shaqaalaha wakaalada dakhliga m.m goday oo uu horkacayo maareeyaha wakaalada dakhliga mm goday iyo Madaxa arrimaha Xisbiga m.m goday ay ku beereen Dhirr, taasoo shaqsi kastaa uu beeray in kabadan 5 geed.
Hadaba Maareeyaha Wakaalada Dakhliga Maamulka Magaalada Goday mudane Cabdulaahi Yaasiin Maxamed oo goobtaas dhul beeristu kasocotay ugu waramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in dhul beeristan ujeedadeedu tahay hirgalinta hadaladii Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ee ahaa cagaarinta iyo qurxinta magaalooyinka. Wuxuuna intaa kudaray maareeyuhu in maanta ay beereen 150 geed oo ay ka beereen badhtamaha magaalada ama goobta kulanka- wadooyinka ee looyaqaano masooriyaaga. wuxuuna mahadcelin u soo jeediyay dhamaan shaqaalaha maamulka magaalada goday gaar ahaan shaqaalaha wakaalada dakhliga sida wadinyada leh ee ay uwada fuliyeen dhir beerista maanta. Wuxuuna xusay in dhirtani ay noqoto mid sifiican loodhawro si ay qayb uga qaadato bilicda iyo caafimaadka magaalada. Wuxuuna hadalkiisii kusoo xidhay in shaqaalahani ay dhamaantood kamid yihiin unug aasaasiga XDSHSI ee kadhisan mm goday. Wuxuuna tilmaamay inay adkaynayaan hawlaha shaqo ee waajibka ah iyo kuwa muwaadinimada ah ee sida maanta oo kale loofuliyay dhir beeristaas.
Sidookale, waxaa isna kahadlay dhirbeeristan Madaxa Arrimha Xisbiga Maamulka Magaalada Goday mudane Axmed Maki Cabdulaahi ayaa sheegay in dhir beeristani ay qaybkatahay hirgalinta siyaasada horumarineed ee uu qaatay XDSHSI islamarkaana ay maanta ku beereen masooriyaaga badhtamaha magaalada dhir farabadan. Wuxuuna hadalkiisii kusooxidhay an ay siiwadayaan dadaalada lagu fulinayo qorshayaasha uyaala dalka iyo deegaankaba.
isku soo wada duuboo dhir beeristan badhatamaha magaalada laga sameeyay ayaa kusoo dhamaaday jawi wanaagsan iyo rajo fiican.